Platform Grille, Walkway nothango lwaso lobhedu, nothango lwentsimbi - Weijia
IMBALI YELETHA I-WEIJIA METH:
1997 ● Ukusekwa (Weijia Metal Mesh Factory).
2008 ● Fumana isiqinisekiso sokungenisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe (Hebei Weijia Metal Mesh Co, Ltd).
2012 ● Fumana isatifikethi se-ISO 9001.
2015 ● Izixhobo imveliso Advanced kunye standardised mveliso entsha kusetyenziswa.
2017 ● Waqala ukunikela ingqalelo kwisisa, ngokunikela izithole zemithi yeziqhamo, iintlobo zehagu, njl.
2019 ● Gqibezela uhlengahlengiso lwenkqubo yezabelo.
2020 ● Kugqityiwe ukuqinisekiswa kwamashishini aphakamileyo.
Ukuzinza kwemveliso kunye nenkonzo esemgangathweni!
Singomnye wabavelisi abakhulu
Metal welding ucingo wocingo, 3D ukugoba egobile ukuba strenghten ucingo. unyango umphezulu idip eshushu kwalenza, ukutyabeka i-pvc, ukutyabeka umgubo
Bamba i-strut uthango njengendawo yokuhambahamba okanye amanyathelo ezinyuko. Umsebenzi ophambili unxamnye neskid kunye nokhuseleko. Izinto eziphathekayo zinikela nge-carbon carbon, i-aluminium kunye nentsimbi engenasici
Iqela lokuthengisa lobungcali kunye nokuphendula ngokukhawuleza kumthengi kwiiyure ezili-12.
Umgangatho olungileyo ngesiqinisekiso se-ISO 9001 ukusukela ngonyaka ka-1997.
Wamkelekile ukubuza ixabiso